Isku dhac u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo kuwa Somaliland oo ka dhacay gobolka Sanaag - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaIsku dhac u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo kuwa Somaliland oo ka dhacay gobolka Sanaag
Ciidamo katirsan Puntland oo ku sugan jiida hore ee gobolka Sanaag. [Sawir Hore]
Badhan-(Puntland Mirror) Isku dhac ayaa ciidamada Puntland iyo kuwa Somaliland maanta oo Arbaco ah ku dhexmaray deegaan u dhow magaaada Hadaaftimo ee gobolka Sanaag, sida bog wareedka Puntland Mirror ay u sheegeen ilo-wareedyo deegaanka ah.
Weli ma jiraan faahfaahino deg-deg ah oo ku saabsan khasaraaha ka dhashay isku dhacaas.
Talaadadii, isku dhac kale oo u dhaxeeyay ciidamada labada maamul ayaa ka dhacay magaalo xeebeedka Laasqoray ee gobolka Sanaag. Waxaana la sheegay in hal qof uu ku dhintay.
Sababta keentay isku dhaca maanta si buuxda looma oga balse ilo-wareedyada ayaa sheegaya in rasaastu bilaabmatay kadib markii ciidamo katirsan maamulka Somaliland oo aagaas saldhig ku lahaa ay soo durkeen.
Puntland ayaa bilihii u dambeeyay awood weyn ku yeelatay waqooyiga gobolka Sanaag, kadib markii ay la wareegtay dhammaan ciidamadii deegaankaas u dhashay oo horey uga mid ahaa maamulka Somaliland.
London-(Puntland Mirror) Maxamed Aadan Xirsi “Teera”, oo ahaa saxafi Soomaaliyeed oo rug cadaa ah ayaa maanta oo Khamiis ah ku geeriyooday magaalada Lnodon ee dalka UK, sida ay xaqiijiyeen qoyskiisu. Teera ayaa asbuucyadii u dambeeyay [...]